“Ma doonayo in kuwaan ay ila joogaan Liverpool.” – Jürgen Klopp – Gool FM
(Liverpool) 06 Maarso 2021. Tababaraha reer Germany ee Jürgen Klopp ayaa hadalo kulul ka sheegay xaallada ay hadda ku sugan tahay kooxda Liverpool, iyo go’aankiisa kaga aadan inuu sameeyo heshiisyo ciusub oo kooxda lagu xoojinayo, haddii aysan Reds u soo bixin tartanka Champions League xilli ciyaareedka dambe.
Jürgen Klopp ayaa ka soo muuqday shir jaraa’id kahor kulanka ay Axada kula ciyaari doonaan Fulham garoonka Anfield, kaasoo qeyb ka ah kulamada toddobaadkan ee horyaalka Premier League.
Chelsea ayaa khamiistii guuldarro xanuun badan baday kooxda Liverpool oo ay ku booqatay garoonka Anfield, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-1, ciyaar qayb ka aheyd kulamada horyaalka Premier League, taasoo xaallada ku sii adkeysay Reds.
Haddaba Jürgen Klopp ayaa hadaladii uu ka jeediyay shirka jaraa’id waxaa ka mid ahaa:
“Qofkasta oo shuruudo nooga dhigo, sida ka ciyaarista Champions League, ma doonayo inuu kooxda ka mid noqdo.”
“Sidoo kale, kuwa doonaya inay baxaan, sababtaan darteed anigu ma doonayo inay ila joogaan, ma jiraan wax shuruud ah halkan taala oo loogu ciyaari karo Liverpool.”